Amulet Arabo tena zato taona no sarona tany Jerosalema
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Amulet Arabo tena zato taona no sarona tany Jerosalema
Jona 17, 2018
by Ny tsipika Media
Mpanoratra Ny tsipika Media
Nahita amulet tanimanga “tena tsy fahita firy” ny arkeology any Jerosalema izay misy soratra arabo izay nanomboka tamin'ny vanim-potoana Abbasyid 1,000 taona lasa izay. Hita tao amin'ny tranokalan'ny Givati ​​Parking Lot ao an-tanànan'i David, ny sombin-javatra kely dia mirefy iray santimetatra ny habeny (latsaky ny antsasaky ny santimetatra) ary hita tao anaty fikarohana iray notarihin'ny Israel Antiquities Authority sy ny Tel Aviv University.
"Ny haben'ny zavatra sy ny endriny ary ny soratra eo aminy dia manondro fa izy io dia toa nampiasaina ho toy ny agulet ho fitahiana sy fiarovana", hoy ny Prof. Yuval Gadot avy amin'ny Oniversite Tel Aviv sy ny Dr. Yiftah Shalev avy amin'ny Israel Antiquities Authority nampita tao amin'ny fanambarana iray. "Satria tsy manana lavaka itadiavana kofehy ity amulet ity dia azontsika atao ny mihevitra fa napetraka tao anaty firavaka na napetraka tao anaty karazana fitoeran-javatra iray."
Ny soratra eo amin'ny amulet dia fitahiana, hoy ny mpikaroka, izay mivaky toy izao: "Kareem Matoky an'i Allah, Tompon'izao tontolo izao dia Allah." Ny vavaka manokana toy izany dia mety ho fahita tamin'izany fotoana izany tamin'ny tombo-kase sy soratra teo amoron-dalana natao tamin'ny lalana alehan'ny mpivahiny silamo mankany Meka eo anelanelan'ny 8th ary taonjato faha-10.
Dr. Nitzan Amitai-Preiss avy amin'ny anjerimanontolo hebreo any Jerosalema dia nilaza tamin'ny The Media Line fa tsy mora ny mamaky ny soratra miniskule amin'ny tombo-kase.
"Efa zatra niasa tamina artifact kely sy soratra aho," hoy ny fanazavan'i Dr. Amitai-Preiss. “Ny olan'ity amulet manokana ity dia na dia nanitatra azy tamin'ny sary avo lenta aza izahay, dia tapitra ny ampahany amin'ny soratra. Tsy ny olon-drehetra no afaka namaky ilay lahatsoratra, indrindra fa kely io. ”
Na dia nisy soratra toy izany aza hita tamin'ny zavatra hafa tamin'ny vanim-potoana iray ihany, indrindra ny tombo-kase sy vato semi-sarobidy, dia tsy mahazatra io karazana zavatra tanimanga io.
"Ity angamba no fotoana voalohany nahitako an'ity zavatra kely ity tao anaty fikarohana," hoy i Dr. Shalev mifandraika amin'ny The Media Line, ary nanampy fa io zavatra hita io dia heverina ho tsy fahita firy ihany koa noho ny fahalemeny izaitsizy (ireo artifacta tanimanga matetika dia tsy voatahiry nandritra ny taonjato maro).
Ilay zavatra dia hita tao amin'ny efitrano kely nasiana tombo-kase teo anelanelan'ny gorodona vita amin'ny plastera, niaraka tamin'ny jiro tamin'ny Abbasidà. Noho ny tsy fitahirizana ny tranobe, dia nilaza ny arkeology fa sarotra ny hamaritana ny tanjony tany am-boalohany.
"Mahaliana ny manamarika fa fametrahana maromaro no manondro hetsika fandrahoan-tsakafo nitranga teto," hoy ny mpikaroka. "Trano antonony tamin'ny vanim-potoana iray ihany no hita tamin'ny fikarohana tany amin'ny toerana iray ihany, anisan'izany ny trano fonenana mifanelanelana amin'ny magazay sy atrikasa."
Ny tranokala arkeolojika Givati, teboka ifantohan'ny fikarohana maro tao anatin'izay 15 taona lasa izay, no loharanon'ny zavatra hita zava-dehibe arkeolojika. Vao tsy ela akory izay ny mpikaroka arkeology dia nahita ny ampahany tamin'ny trano mimanda Seleucid namboarin'ny mpanjaka Hellenista Antiochus IV Epiphanes; villa lehibe avy amin'ny vanim-potoana romana; ary koa vola madinika sy zavatra hafa kely kokoa. Ny fitsangatsanganana ankehitriny dia mifantoka amin'ny vanim-potoana taty aoriana sy manjavozavo kokoa amin'ny tantaran'i Jerosalema, hoy ny Dr. Shalev.
Fikarohana manan-danja toy ny mitranga. tamin'ny 2009 dia nitatitra ny eTN momba ny arkeology ambony any Egypte dia nandavaka fasana hazo iray izay hitazona ny taolan'ny mponina taloha 30.
Loharano: The Media Line